Izindaba - Izinhlobo ze-Transformer nezici
1. Isiguquli samandla, esisetshenziselwa ukukhuphuka noma ukwehliswa kwesistimu yamandla.
2. Hlola i-transformer ukuze ikhiqize amandla kagesi aphezulu, futhi wenze ukuhlolwa kwamandla kagesi aphezulu emishini kagesi.
3. Ama-instrument transformer, afana nama-voltage transformer nama-current transformer, asetshenziselwa ukulinganisa namadivayisi okuvikela ukudluliselwa.
4. Iziguquli zenhloso ekhethekile, ama-transformer esithandweni somlilo kagesi wokuncibilikisa, ama-rectifier transformer we-electrolysis, ama-welding transformers wokushisela, ama-voltage alawula i-voltage ukuze ahlolwe, njll.
(2) Ngokwenani lezigaba
1. Ama-Single-phase transformers asetshenziselwa imithwalo yesigaba esisodwa kanye namaqembu e-transformer ezigaba ezintathu.
2. I-transformer yezigaba ezintathu, esetshenziselwa ukwehla nokwehliswa kwesistimu yezigaba ezintathu.
(3) Ngokuvumelana nefomu elijikajikayo
1. Ama-Autotransformers asetshenziselwa ukuxhuma amasistimu wamandla aphezulu kakhulu kanye namandla amakhulu.
2. Ama-transformer anamawindi amabili, asetshenziselwa ukuxhuma izinhlelo zamandla zamazinga amabili kagesi.
3. Ama-transformer anamawindi amathathu asetshenziselwa ukuxhuma izinhlelo zamandla zamazinga kagesi amathathu, futhi ngokuvamile asetshenziswa kuziteshi ezingaphansi zesifunda zezinhlelo zamandla.
(4) Ngokwesimo somgogodla wensimbi
1. Ama-Core-type transformers, asetshenziswa ezinhlelweni zamandla kagesi aphezulu.
2. Ama-Shell-type transformers, ama-transformer akhethekile amanje aphezulu, njengama-transformer esithandweni somlilo kagesi kanye nama-welding transformers, njll;noma ama-transformer kagesi wezinsimbi zikagesi, ama-TV, imisakazo, njll. Isakhiwo segobolondo singasetshenziselwa ama-transformer amandla amakhulu.
(5) Ngokwendlela yokupholisa
1. Ama-transformer acwiliswa ngamafutha, njengokuzipholisa ngokucwiliswa ngamafutha, ukupholisa umoya okucwiliswa ngamafutha, ukucwiliswa kwamanzi okucwiliswa ngamafutha, okuphoqelekile okujikeleza uwoyela-ajikeleza umoya-opholile kanye nokupholisa ngamanzi, njll.
2. Ama-transformer ohlobo olomile athembele ku-convection yomoya ukuze apholise.Ama-voltage aphansi anjalo, ama-transformer angenawo uwoyela ngokuvamile apholiswa abalandeli futhi afaneleka ukuvikela umlilo nezinye izikhathi.Kuma-low-voltage transformers asetshenziswa esakhiweni sefekthri yeyunithi ye-600MW, ama-transformer ohlobo olomile avame ukusetshenziselwa izidingo zokuvikela umlilo.
3. Ama-transformer agcwele igesi asebenzisa igesi ekhethekile (SF6) esikhundleni samafutha e-transformer ukuze aqede ukushisa.
4. I-evaporative cooling transformer, sebenzisa uketshezi olukhethekile esikhundleni samafutha e-transformer ukuze uhlukanise futhi uchithe ukushisa.